थप २ हजार ८३८ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि, ३० को मृत्यु | Notebazar
थप २ हजार ८३८ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि, ३० को मृत्यु
काठमाण्डौं। ६श्रावण, २०७८, बुधबार / Jul 21, 2021 17:32:pm
पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ८३८ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा १२ हजार ६१६ वटा नमुनाको परीक्षण गर्दा २ हजार ८३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
बुधबार देशभरमा ८ हजार ७१५ पिसीआर परिक्षणबाट एक हजार ९१८ जना र ३ हजार ९०१ एन्टिजेन विधिबाट ९२० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा ३० जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९ हजार ६३७ पुगेकोे छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४७५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । हालसम्म ६ लाख ३६ हजार ४०२ जनाले कोरोना परास्त गरेका छन् । हाल कोभिड निको हुने दर ९४.६ प्रतिशत रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ६९७ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । ललिपुरमा १२८ जना, काठमाडौंमा ४९० र भक्तपुरमा ७९ जना सङ्क्रमण थपिएका हुन् ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अझ पनि धेरै व्यक्ति सङ्क्रमित आशङ्कामा रहेकाले परीक्षणको दर बढाउनुपर्ने बताए । “जति धेरै परीक्षण ग¥यो । त्यति नै मानिसलाई बचाउन सकिन्छ”, उनले भने, “त्यसैले सङ्क्रमितको सङ्ख्या पत्ता लगाउनका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्दछ ।”
सहप्रवक्ता अधिकारीले खोप सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने बताए । उनले खोप लगाउन जाँदा भीडभाड नगर्न र जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरे । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलाले निधेषाज्ञा खुकुलो भएसँगै सङ्क्रमणको दर बढेकाले जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरे ।
बाँस्तोलाले अहिले पनि अस्पतालमा कोभिड–१९ का सङ्क्रमित आउने क्रममा कमी नभएकाले सचेत रहन आग्रह गरे । उनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण निको भए पनि मासपेशी दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, मानसिक समस्या हुनेजस्ता समस्या देखिने गरेकाले समयमा नै उपचार गर्न आग्रह गरे ।
कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा फ्रान्सद्वारा थप सहयोग प्रदान2days ago
पर्यटनसँग जोडिएका सबैजसो व्यापार व्यवसाय चौपट, होटलका बुकिङ धमाधम रद्द6days ago
शनिबार एक हजार २६८ मा सङ्क्रमण, ९ को निधन 04/09/2021
शुक्रबार १७५६ जनामा कोरोना संक्रमण, २३ जनाको मृत्यु 03/09/2021
नेपालमा एक करोड ९२ लाख मात्रा कोभिड खोप लगाइयो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा बधाई 02/09/2021
शनिबार १,८५७ मा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा २,२२२ निको भए, २७ को निधन 28/08/2021
थप १९२० जना कोरोना सङ्क्रमित थपिए, २४ को मृत्यु 22/08/2021
शनिबार दुई हजार ७५ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिए, ३० को मृत्यु 21/08/2021